Fe-potoana vaovao Commuting-Electric Skateboards - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Matetika, noho ny habeny sy ny lanjan'ny skateboards mitondra azy ireo fa resaka. Ny Alemaina-monina ny ankamaroany mpiasa efa ela no te hahalala momba ny "Electro-mivezivezy", izay lehibe olana ara-politika tany Alemaina, ary tena any amin'ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny rehetra Eoropa. Manolotra voalohany isika-notch mpividy fanampiana ho pahombiazana mba hiaro anao sy miasa izy na tsia ianao modely vaovao mpividy na ny fotoana maharitra indray! Ny fotoana manao fiarovan-doha, ary koa ny hafa azo ekena fiarovana fitaovana (oh: Niantehitra eo amin'ny an-toerana fitsipika, mety tsy maintsy hitafy ny fiarovan-doha, rehefa nitaingina. Mila fanampiana mba hanorina ny herinaratra skateboard? KOOWHEEL Drive dia mountable herinaratra fiara izay mivily misy skateboard tsy tapaka ho any an- herinaratra skateboard - ao anaty minitra. Eo amin'ny lafiny isan-karazany, dia hanjo avy nilaza fa ny lehibe kokoa ny isan-karazany, ny avo satria azo avela cowl mampitolagaga lavitra tsy mila recharge azy isan-10 minitra. Aza maninona Raha mitady ny marika ara-bola vaovao na fomba fitaterana fotsiny mila mahafinaritra, ny Koowheel Cruiser dia hanome anao ny faran'izay tsara ny Skating.
Koowheel Cruiser ny tsara dia tsara ny vokatra tonga eto ho toy ny tsy nampoizina, mandinika ny sarobidy, izay fihenana noho ny maro hafa skateboards herinaratra. Ny Koowheel dia niasa mampiasa ny handheld maso lavitra, izay mirehareha ny maotera koa mahafantatra-fa ny brushless. Amin'ny maha-mpisolo toerana, dia manome ny fahefana teratany governemanta mba hamaritana raha tsy hamela na ny fahaizana manokana ao amin'ny tanàna ny olona. Koowheel notendren'Andriamanitra ho tsara indrindra sy ny tafahoatra fampisehoana skateboards herinaratra ho an'ny tanàna sy ny fanatanjahan-tena ny asa fitaterana mpankafy. Koowheel Manome ny herinaratra skateboardamin'ny sarobidy takatry ny saina sy ny fifaninanana takatry ny vola antoka amin'ny vola lany. Liana aho ny hasarobidin 'maka risika - eo amin'ny tontolo izay matetika aleony tsy ataontsika. Izany dia manome fahafahana anao mba hanara-maso ny bateria ambaratonga, mba tsy hahita ny tenanao amin'ny tsy misy ilàna azy skateboard Avy hatrany. Singa manan-danja iray ao amin'ny herinaratra skateboard fitaovana no vatoaratra ho an'ny powering ny motored skateboard, ny maso sy ny braking ho haingana, ny birao sy ny fitomboan'ny tena-dovia ny mampatanjaka ny bateria.
Maotera roa manan-danja ny mandinika eto karazany mety ho in-kodiarana na ny fehin-kibo Hub Motors nanosika ireo. Ny Electric Skateboard Kits dia hanampy hanao izany dingana tsotra. Matetika, misy herinaratra skateboards eny an-dalambe sy amin'ny herinaratra-skateboards. Satria iray mafana indrindra, ary ny ao amin'ny lahatsoratra be mpijery indrindra, be dia be ny olona niteny tamiko tao an-tamberina fa nisy ireo sasany tena tsara tsy ampy hazo fisaka. Na izany aza, araka ny fampandrosoana ny lasantsy Powered skateboards, nisy antony tsara vitsivitsy izay nahatonga ireo zana-kazo maotera hatao voarara toy ny: feo navoakan'ny ny fitaovana sy ny milina lasantsy izay namorona fandotoana.
Ny fikatsahana ny mahita ny tena tsara indrindra herinaratra skateboard mitohy, vonona ho fantatra? KOOWHEEL skateboards afangaro ny halalin'ny asa amin'ny fanatanjahan-tena be loatra ny mahazatra thrills ny Skateboarding sambo iray amin'ireo tsara indrindra kilasimandry angovo traikefa misy! Amin'izao fotoana izao dia ho entina, ao ny fijeriko, ny 10 skateboards lehibe indrindra ho an'ny fampiasana isan'andro. Top-of-ny-tsipika nandinika mpanamboatra ho an'ny taona 2018 dia Koowheel. Manolotra ara-dalàna ny hafainganam-pandeha 30km / h, ambony hafainganam-pandeha 45km / h, mandeha haingana kokoa, ary afaka handrakotra manodidina ny 20 ka hatramin'ny 25 km iray bateria anjara-raharaha. Ny ankehitriny bateria dia Avo 20pcs18650 tahan'ny Lithium sela.